Shina 2108 AWWA C504 C516 Valin'ny alàlan'ny lolo misy paingotra sy mpanamboatra | Convista
Ny fotodrafitrasa misy fitaovana tsara sy ny fitantanana kalitao miavaka miavaka amin'ny dingana rehetra amin'ny taona dia ahafahanay manome antoka ny fahafaham-pon'ireo mpividy ho an'ny 2108 AWWA C504 C516 Double Eccentric Butterfly Valve, ny vokatra rehetra dia miaraka amina serivisy tsara kalitao sy tonga lafatra aorian'ny fivarotana. Miorina amin'ny tsena sy mifantoka amin'ny mpanjifa no efa narahinay. Manantena fatratra ny fiaraha-miasa Win-Win!
Ny toerana sahaza anay tsara sy ny fitantanana kalitao miavaka miavaka amin'ny dingana rehetra amin'ny taona dia ahafahanay manome toky ny fahafaham-pon'ny mpividy ho an'ny Cast Steel Double Eccentric Butterve Valve, Valin'ny lolo lolo misy paingotra roa, maodely maharitra izy ireo ary mampiroborobo tsara erak'izao tontolo izao. Tsy misy fanjavonana asa lehibe ao anatin'ny fotoana fohy, tokony ho anao manokana manana kalitao mahafinaritra izany. Notarihin'ny fitsipiky ny Prudence, Fahombiazana, firaisana ary fanavaozana. ny orinasa manao ezaka lehibe hanitarana ny varotra iraisam-pirenena, hampiakatra ny orinasany. manatsara sy manatsara ny ambaratonga fanondranana azy. Matoky izahay fa hanana vinavina mavitrika ary hozaraina manerana an'izao tontolo izao amin'ny taona ho avy.
Fahazoana na mihoatra ny fitakiana AWWA C504 / C516.
Karazana eccentrica avo roa heny.
Tady seza vita amin'ny kodiarana nikatona tamin'ny kapila.
Seza vy tsy misy fangarony ao amin'ny vatana.
Fametrahana flange mifanaraka amin'ny MSS SP-102 na ISO 5211.
Ny flange sy ny fandavahana dia mifanaraka amin'ny ASME B16.1 Kilasy 125 / Kilasy 250.
Miara-miasa amin'ny mpandraharaha fitaovana.
150psi nomena isa -10 ° C hatramin'ny 120 ° C (14 ° F hatramin'ny 250 ° F) ho an'ny lineria EPDM.
150psi nomena isa-10 ° C hatramin'ny 82 ° C (14 ° F hatramin'ny 180 ° F) ho an'ny liner BUNA-N.
NSF nankatoavina fusion mifamatotra mifono na ranon-tsary hosodoko.
Seza vatana mifatotra BUNA-N.
-kevi-pitantanana vy malemy
Disc vy malemy
Previous: Valizy MJ Series Spray Water Control
Manaraka: Paompy fanodinana simika CH Standard
Cast Steel Double Eksentric lolo Valve
Valizy lolo ehely roa heny
DSA paompy mitsentsitra avo roa heny
Valve fiarovana azo antoka lohataona feno lohataona (andiany W)
Forge Steel Trunnion nitaingina Ball Welded tanteraka ...